Chelsea, Iyo Manchester United Oo Ku Dagaallami Doona Paulo Dybala Xagaagan?
HomeWararka Ciyaaraha MaantaChelsea, iyo Manchester United oo ku dagaallami doona Paulo Dybala xagaagan?
April 14, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Labada kooxood ee Premier League ee Chelsea iyo Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay kula biireen Paris Saint-Germain tartanka loogu jiro saxiixa Juventus Weeraryahanka Paulo Dybala xagaagan.
27 jirkaan mustaqbalkiisa kooxda ka dhisan Serie A shaki ayaa ku jira madaama aysan weli wax wadahadal ah la gaarin ciyaaryahanka, kaasoo arki doona qandaraaskiisa dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Sida laga soo xigtay Tuttosport , Chelsea iyo United ayaa labaduba isha ku haya xaalada Dybala waxayna diyaar u yihiin inay u dhaqaaqaan xagaagan haddii lala socodsiiyo helitaankiisa.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda ka ciyaarta Ligue 1 ee PSG ayaa la rumeysan yahay inay safka hore kaga jirto saxiixa xiddiga reer Argentina, kaasoo laga yaabo inuu ku qanciyo inuu ku biiro ninka ay dhalashada wadaagaan ee Mauricio Pochettino iyo sidoo kale xiddigaha weerarka ka ciyaara ee Neymar iyo Kylian Mbappe .
Ka dib markii ay ku dhawaaqday inay lumisay 99m tan iyo sanadka loo bedelay, Juventus ayaa diyaar u ah inay iibiso ilaa lix ciyaaryahan oo kooxda koowaad ah xagaagan waxaana laga yaabaa inay ku qasbanaato inay lacag kaash ah ku siiso mid ka mid ah magacyadooda xiddig sida Dybala ama xitaa Cristiano Ronaldo .
Dybala waxaa soo gaadhay dhaawacyo ololahan oo dhan taas oo keentay in kaliya uu soo muuqday 18 jeer tartamada oo dhan, isaga oo dhaliyay 4 gool laba kalena caawiye ka noqday.